1 Ahene 8:1-66
8 Saa bere no Solomon+ boaboaa+ Israel mpanyimfo+ ano, mmusuakuw mu atitiriw+ ne Israelfo agyanom+ mpanyimfo nyinaa, sɛ wɔmmra Ɔhene Solomon nkyɛn wɔ Yerusalem, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔfa Yehowa apam adaka+ no mfi Dawid Kurow+ mu, kyerɛ sɛ Sion,+ mmra. 2 Enti Israel mmarima nyinaa boaboaa wɔn ano baa Ɔhene Solomon nkyɛn afahyɛ no ase,+ wɔ ɔsram Etanim, ɔsram a ɛto so ason+ no mu. 3 Ɛnna Israel mpanyimfo nyinaa bae, na asɔfo no kɔsoaa+ Adaka+ no. 4 Na wɔde Yehowa adaka no ne ahyiae+ ntamadan+ ne anwenne kronkron a ɛwɔ ntamadan no mu nyinaa bae; asɔfo ne Lewifo+ no na wɔde bae.+ 5 Ná Ɔhene Solomon ne Israel bagua a wɔka ne ho, wɔn a wɔbaa ne frɛ no nyinaa wɔ Adaka no anim de nguan ne anantwi rebɔ afɔre;+ mmoa no dodow nti wɔantumi ankan wɔn, na wɔantumi ammu wɔn ano.+ 6 Afei asɔfo no de Yehowa apam adaka+ no baa ne sibea,+ pia mu pia no mu, Kronkron mu Kronkronbea hɔ, na wɔde sii kerubim+ no ntaban ase. 7 Ná kerubim no atrɛtrɛw wɔn ntaban mu, faako a Adaka no si no, enti kerubim no kataa Adaka no ne ɛho nnua so.+ 8 Ná ɛho nnua+ no woware, enti na wohu nnua no ti wɔ Kronkronbea hɔ wɔ pia mu pia no anim, nanso na wonhu wɔ abɔnten, na ɛhɔ na ɛwɔ de besi nnɛ.+ 9 Hwee nni Adaka no mu, gye abopon+ abien a Mose de guu mu+ wɔ Horeb no; da a Israel mma fi Egypt asase so reba+ a Yehowa ne wɔn yɛɛ apam+ no na ɔde guu mu. 10 Na ɛbae sɛ bere a asɔfo no fii adi fii kronkronbea hɔ no, omununkum+ bɛhyɛɛ Yehowa fie no mã. 11 Omununkum no nti, asɔfo+ no antumi annyina hɔ ansom,+ efisɛ Yehowa anuonyam+ hyɛɛ Yehowa fie no mã.+ 12 Saa bere no Solomon kae sɛ: “Yehowa aka sɛ omununkum kusuu+ mu na ɔbɛtena. 13 Matumi asi tenabea a ɛkorɔn ama wo,+ na mayɛ baabi a wobɛtena+ daa.”+ 14 Afei, ɔhene dan n’ani sɛ ɔrehyira+ Israel bagua no nyinaa bere a Israel bagua no nyinaa gyinagyina wɔn nan so no. 15 Na ɔkae sɛ: “Nhyira nka Yehowa,+ Israel Nyankopɔn a ɔde n’ano kasa kyerɛɛ me papa Dawid,+ na ɔnam ne nsa so ama aba mu+ no; ɔno na ɔkae sɛ, 16 ‘Efi da a miyii me man Israel fii Egypt de besi nnɛ da yi, minyii+ Israel mmusuakuw no kurow bi sɛ wonsi ofie+ mma me wɔ hɔ mma me din+ ntena hɔ, nanso mɛpaw Dawid ma wabedi me man Israel so.’+ 17 Ná ɛda me papa Dawid koma so sɛ obesi ofie ama Yehowa, Israel Nyankopɔn din.+ 18 Nanso Yehowa ka kyerɛɛ me papa Dawid sɛ, ‘Esiane sɛ ɛda wo koma so sɛ wubesi ofie ama me din nti, woayɛ ade sɛ ɛda wo koma so.+ 19 Na mmom ofie no de, ɛnyɛ wo na wubesi; wo ba a obefi w’asen mu aba na obesi ofie no ama me din.’+ 20 Yehowa ama asɛm a ɔkae no aba mu,+ asɛm a Yehowa kae sɛ mɛsɔre abesi me papa Dawid ananmu na matena Israel ahengua so+ na masi ofie ama Yehowa, Israel Nyankopɔn din,+ 21 na mapɛ baabi de Adaka no asi no; emu na apam+ a Yehowa ne yɛn agyanom yɛe bere a oyii wɔn fii Egypt asase so no wɔ.” 22 Afei Solomon kogyinaa Yehowa afɔremuka+ no anim wɔ Israel bagua no nyinaa anim trɛw ne nsam kyerɛɛ ɔsoro.+ 23 Ɛnna ɔkae sɛ: “O Yehowa, Israel+ Nyankopɔn, Onyame biara nni hɔ, ɔsoro ne asase so a ɔte sɛ wo;+ wo a wokora apam ne adɔe+ so ma wo nkoa+ a wɔde wɔn koma nyinaa nantew w’anim+ no. 24 Wo na woama bɔ a wohyɛɛ w’akoa, me papa Dawid no aba mu; wo na wode w’ano hyɛɛ bɔ no, na ɛnnɛ da yi wonam wo nsa so ama aba mu.+ 25 Enti afei, Yehowa, Israel Nyankopɔn, ma bɔ a wohyɛɛ w’akoa, me papa Dawid no nnyina. Woka kyerɛɛ no sɛ, ‘Sɛ wo mma hwɛ wɔn akwan yiye na wɔnantew m’anim sɛnea woanantew m’anim yi a, obusuani a ɔbɛtena Israel agua so+ remmɔ wo, m’anim.’ 26 O Israel Nyankopɔn, mesrɛ wo, ma bɔ+ a wohyɛɛ w’akoa, me papa Dawid no ntim. 27 “Enti Onyankopɔn bɛtena asase so ampa ara?+ Hwɛ! Ɔsoro+ ne ɔsoro mu soro+ mpo ntumi nkora wo,+ na ofie+ a masi yi na ɛbɛyɛ dɛn! 28 Nanso, dan w’ani kyerɛ w’akoa mpaebɔ+ ne ne nkotɔsrɛ,+ O Yehowa me Nyankopɔn, na tie w’akoa sufrɛ ne mpae a merebɔ w’anim nnɛ da yi.+ 29 Bue w’aniwa+ hwɛ ofie yi awia ne anadwo, faako a wokae sɛ, ‘Me din bɛtena hɔ’+ no, na tie mpae a w’akoa de n’ani kyerɛ ha bɔ no.+ 30 Sɛ w’akoa ne wo man Israel de wɔn ani kyerɛ ha bɔ mpae a, tie yɛn nkotɔsrɛ;+ sɛ edu w’asom, wo soro+ tenabea hɔ a, tie yɛn. Tie na fa kyɛ+ yɛn. 31 “Sɛ onipa bi yɛ ne yɔnko+ bɔne na ne yɔnko no ma odi nsew ka ntam+ ma asodi bɛda no so, na ɔba w’afɔremuka no anim ofie yi mu bere a wadi nsew no a, 32 ɛnde fi wo soro hɔ tie na yɛ biribi fa bu wo nkoa no ntam atɛn, na bu ɔbɔnefo no fɔ ma ne bɔne nkogu n’atifi,+ na bu ɔtreneeni no bem+ ma no, sɛnea ne trenee te.+ 33 “Sɛ wo man Israel di nkogu wɔ atamfo anim,+ bɔne a wɔayɛ wo+ nti, na sɛ wɔsan ba wo nkyɛn+ bɛkamfo wo din,+ na wɔbɔ mpae+ de wɔn nkotɔsrɛ ba w’anim ofie yi mu+ a, 34 ɛnde wo ara fi soro hɔnom tie, na fa wo man Israel bɔne kyɛ wɔn,+ na san fa wɔn bra+ asase a wode maa wɔn agyanom no+ so. 35 “Sɛ ɔsoro mu to na osu antɔ,+ bɔne+ a wɔayɛ wo nti, na brɛ a woabrɛ wɔn ase+ nti, wɔsan fi wɔn bɔne ho de wɔn ani kyerɛ ha bɔ mpae+ na wɔkamfo wo din a, 36 ɛnde wo ara fi ɔsoro hɔ tie, na fa wo nkoa, wo man Israel bɔne kyɛ wɔn efisɛ wo na wokyerɛkyerɛ+ wɔn ɔkwan pa a wɔmfa so;+ ma osu ntɔ+ w’asase a wode ama wo man sɛ wɔn agyapade no so. 37 “Sɛ ɔkɔm+ na ɛbɛba asase no so oo, sɛ ɔyaredɔm+ na ɛbɛba oo, sɛ ɔhyew na ɛbɛba oo, sɛ ɔyare na ebesi wɔn afuw so+ oo, sɛ mmoadabi+ ne ntɛfrɛw+ na ɛbɛba oo, sɛ wɔn atamfo na wɔbɛtow ahyɛ wɔn nkurow so oo, ɔhaw anaa ɔyare biara a ɛbɛba wɔn so no, 38 mpaebɔ+ anaa nkotɔsrɛ+ a onipa biara anaa wo man Israel+ nyinaa de bɛba w’anim no,​—efisɛ obiara nim ne komam haw+—sɛ wɔtrɛw wɔn nsam kyerɛ ofie+ yi a, 39 ɛnde wo ara fi ɔsoro,+ wo tenabea+ hɔ tie na fa bɔne kyɛ+ na ma+ onipa biara sɛnea n’akwan te,+ efisɛ wo na wunim ne komam+ (na wo nko ara na wunim nea ɛwɔ adesamma nyinaa komam);+ 40 ɛno bɛma wɔasuro+ wo wɔn nkwa nna nyinaa, nna dodow a wobedi wɔ asase a wode maa yɛn agyanom+ no so no. 41 “Afei ɔhɔho+ a omfi wo man Israel mu mpo, sɛ wo din nti ofi akyirikyiri asase so ba,+ 42 (efisɛ wɔbɛte wo din kɛse+ ne wo nsa a ɛyɛ den+ ne wo basa a woateɛ mu no ho asɛm) na ɔde n’ani kyerɛ ofie yi bɔ mpae+ a, 43 wo ara fi ɔsoro, wo tenabea+ hɔ tie na yɛ ɔhɔho no abisade a ɔde to w’anim nyinaa ma no,+ na ama asase so aman nyinaa ahu wo din+ na wɔasuro wo sɛnea wo man Israel suro wo no, na wɔahu sɛ wo din na ɛda ofie a masi yi so.+ 44 “Sɛ wo man fi adi ne wɔn atamfo kɔko+ ɔkwan a wobɛsoma wɔn no so,+ na wɔde wɔn ani kyerɛ kurow a woapaw+ ne ofie a masi ama wo din+ yi na wɔbɔ Yehowa mpae+ a, 45 wo nso fi ɔsoro tie wɔn mpaebɔ ne wɔn nkotɔsrɛ na di wɔn asɛm ma wɔn.+ 46 “Sɛ wɔyɛ bɔne tia wo+ (efisɛ onipa biara nni hɔ a ɔnyɛ bɔne),+ na sɛ wo bo fuw wɔn na wode wɔn hyɛ wɔn atamfo nsa ma atamfo no de wɔn kɔ nkoasom mu, atamfo asase a ɛwɔ akyirikyiri anaa nea ɛbɛn so,+ 47 na wɔn ani ba wɔn ho so, asase a wɔde wɔn akɔyɛ nkoa+ wɔ hɔ no so, na wɔsan ba+ wo nkyɛn bɛkotow srɛ+ wo, asase a wɔakɔyɛ hɔ nkoa+ no so na wɔka sɛ, ‘Yɛayɛ bɔne,+ yɛafom,+ na yɛadi amumɔyɛsɛm,’+ 48 na sɛ wɔde wɔn koma nyinaa ne wɔn kra nyinaa san ba wo nkyɛn,+ wɔn atamfo a wɔde wɔn ayɛ nkoa no asase so, na wɔde wɔn ani kyerɛ asase a wode maa wɔn agyanom ne kurow a woapaw ne ofie a masi ama wo din yi bɔ mpae+ a, 49 wo nso fi ɔsoro, wo tenabea+ hɔ tie wɔn mpaebɔ ne wɔn nkotɔsrɛ, na di wɔn asɛm ma wɔn,+ 50 na wo man a wɔayɛ wo bɔne+ no, fa bɔne a wɔayɛ wo+ no nyinaa kyɛ wɔn,+ na ma wonnya mmɔborɔhunu,+ wɔn a wɔde wɔn ayɛ nkoa no anim, na wonhu wɔn mmɔbɔ 51 (efisɛ wɔyɛ wo man ne w’agyapade+ a wuyii wɔn Egypt,+ fii dade fononoo+ no mu de wɔn bae); 52 bue w’aniwa wɔ w’akoa nkotɔsrɛ ne wo man Israel nkotɔsrɛ+ so, na tie wɔn sufrɛ a wɔde ba w’anim+ nyinaa. 53 O Awurade Tumfoɔ Yehowa, wo na wuyii wɔn yɛɛ w’agyapade fii asase so aman nyinaa mu,+ sɛnea wonam w’akoa Mose+ so kae bere a wuyii yɛn agyanom fii Egypt no.” 54 Bere a Solomon wiee mpae a ɔbɔɔ Yehowa, ne nkotɔsrɛ a ɔde kɔɔ n’anim yi nyinaa no, ɔsɔre fii Yehowa afɔremuka no anim; ɔsɔre fii ne nkotodwe+ anim, na ogyaee ne nsam a watrɛw akyerɛ ɔsoro+ no. 55 Afei ɔsɔre gyinaa+ hɔ, na ɔde nne kɛse hyiraa+ Israel bagua no nyinaa sɛ: 56 “Nhyira nka Yehowa+ a wama ne man Israel ɔhome sɛnea bɔ a ɔhyɛe nyinaa te+ no. Nneɛma pa a ɔnam n’akoa Mose so hyɛɛ ho bɔ+ no nyinaa, biako mpo antɔ fam.+ 57 Yehowa yɛn Nyankopɔn nni yɛn akyi+ sɛnea odii yɛn agyanom akyi+ no. Mma ɔmmpo yɛn na mma onnnyaw yɛn,+ 58 na ɔnnan yɛn koma+ mmra ne nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛnantew n’akwan+ nyinaa so na yɛadi ne mmara nsɛm+ ne n’ahyɛde+ ne n’atemmusɛm+ a ɔde yɛɛ ahyɛde maa yɛn agyanom no so. 59 Na me nsɛm a mede ayɛ nkotɔsrɛ Yehowa anim yi, ma ɛmmɛn+ Yehowa yɛn Nyankopɔn awia ne anadwo, na onni n’akoa asɛm mma no na onni ne man Israel nso asɛm mma wɔn, sɛnea ehia da biara;+ 60 na ama asase so aman nyinaa ahu+ sɛ Yehowa ne nokware Nyankopɔn+ no, na obiara nni hɔ bio.+ 61 Momma mo koma nni mũ+ Yehowa yɛn Nyankopɔn ho, na monnantew n’ahyɛde so na munni ne mmara nsɛm so sɛnea moyɛ nnɛ da yi.” 62 Na ɔhene ne Israel nyinaa bɔɔ afɔre kɛse Yehowa anim.+ 63 Solomon de anantwi mpem aduonu abien ne nguan mpem ɔha aduonu+ bɔɔ asomdwoe afɔre+ a ɛsɛ sɛ ɔbɔ ma Yehowa no, na ɔhene ne Israel nyinaa buee+ Yehowa fie no ano. 64 Saa da no, ɔhene yɛɛ Yehowa fie adiwo no mfinimfini hɔ kronkron,+ efisɛ ɛhɔ na ɔbɔɔ ɔhyew afɔre ne aduan afɔre no, na asomdwoe afɔre ho srade no nso, ɛhɔ na ɔhyew no; ná kɔbere afɔremuka+ a ɛwɔ Yehowa anim no sua dodo sɛ ɔbɛbɔ ɔhyew afɔre ne aduan afɔre na wahyew asomdwoe afɔre ho srade+ no wɔ so. 65 Saa bere no, Solomon dii afahyɛ+ no, ɔne Israel nyinaa, bagua kɛse+ a wofi Hamat+ hye so kosi Egypt subon+ ano no, wodii no nnanson Yehowa yɛn Nyankopɔn anim, na wodii nnanson+ bio kaa ho ma ɛyɛɛ nnafua dunan. 66 Na da a ɛto so awotwe no, ogyaa ɔman no kwan,+ na wohyiraa ɔhene de anigye+ ne akomatɔyam+ kokɔɔ wɔn afie, adepa+ a Yehowa ayɛ ama n’akoa Dawid ne ne man Israel nyinaa nti.